စကာင်္ပူသူဋ္ဌေးကို အံ့သြမှင်သက်စေခဲ့သော မအူပင်မြို့ နယ် ထန်းပင်ကွေ့က ကရင်မလေး.... - MM Live News
စကာင်္ပူသူဋ္ဌေးကို အံ့သြမှင်သက်စေခဲ့သော မအူပင်မြို့ နယ် ထန်းပင်ကွေ့က ကရင်မလေး….
စကာင်္ပူသူဋ္ဌေးကို အံ့သြမှင်သက်စေခဲ့သော မအူပင်မြို့ နယ် ထန်းပင်ကွေ့က ကရင်မလေး ဖွေးစိန်
သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ မိသားစုအရေး ဘဝရှေ့ရေးအတွက် သူများနိုင်ငံ လာအလုပ်လုပ်တာလေ ကျွန်လာခံတာမှ မဟုတ်တာ အဖိနှိမ့်ခံ အပြောအဆိုခံဖို့မှ မဟုတ်တာ …သူတို့ပေးတဲ့ လစာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားကို ပေးခဲ့တာပဲ အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားပဲ…..
လူလူချင်းအပေါ် ငါလစာပေးထားရတယ် ပက်ဆံပေးရတယ်ဆိုပြီး သူတို့ပြောသမျှ ဆိုသမျှ ခေါင်းငုံ့ခံကာ နေတတ်တဲ့သူတွေထဲ ဖွေးစိန် တစ်ယောက်မပါပေါင်။
မိသားစုအရေးကြောင့် စကာင်္ပူကို စွန့်စားပြီး ထွက်ခွါ လာခဲ့ရတာ စင်္ကာပူသွားရင် ဒါတွေ ဒါတွေ သင်ယူဖို့လိုတာ ဆိုတာတွေ အေဂျင့်တွေ စီစဉ်သမျှ ပေးသမျှ သင်တန်းတွေ သင်ယူပြီးမှ ဖွေးစိန်က လာခဲ့တာ ဘလိုင်းသက်သက် လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး….
” နင်တို့ မြန်မာတွေ ဘာမှ စောက်သုံးမကျဘူး ” တဲ့…..ပြောလိုက်တဲ့ သူဋ္ဌေးစကား အသဲကို ဆတ်ဆတ်ခါအောင် နာကျင်သွားတာ ပြောတာတောင် နိုင်ငံနဲ့ချီ ပြောတာ နိုင်ငံကို ထိပါးပြောတာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို စော်ကားလိုက်တာ….
ဖွေးစိန်တစ်ယောက်ထဲကို ” နင်က ဘာမှ အသုံးမကျဘူး ” ပြောရင် ခံနိုင်သေး သီးခံနိုင်သေး ခုက နိုင်ငံကို ထိပါးတဲ့ စကားကို ပြောတာ ဖွေးစိန် ဘယ်သီးခံနိုင်ပါမလဲ…..
ဖြစ်ပုံက ဒီလို…..သူဋ္ဌေးက လျှာရှည်ပြီး အလုပ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ စကားအပိုတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုမေးတာ ပြောတာကို ပြန်မပြောနိုင်လို့တဲ့လေ….နင်တို့ မြန်မာတွေ ဘာမှ စောက်သုံးမကျဘူးဆိုပြီ ပြောလိုက်တာ…..
ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်လူမျိုးမှ မဟုတ်တာ အင်္ဂလ်ိပ်တစ်ယောက်လို ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ အလုပ်ကိစ္စပဲ ပြောနိုင်မှာပေါ့…..ခု မင်းတို့ရွာက ဘာတွေလုပ်စားကြသလဲ …..
အိမ်ခြေဘယ်လောက်ရှိလဲ ….မင်းတို့နိုင်ငံက အေးလား ပူလား …..ရာသီဥတုတွေကော ဘာတွေကော လိုက်မေးနေတာ အကုန်ဘယ်လိုပြောတတ်မှာလဲလို့….ဒါကိုပဲ စောက်သုံးမကျဘူးပြောတော့ ခံနိုင်ရိုးလား…..
သူဋ္ဌေးကို မီးတောက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ ပြန်ကြည့်ပြီး…..ဖွေးစိန် ပြန်ပြောလိုက်တယ်။သူဋ္ဌေးကို ကျမစိန်ခေါ်တယ် ….ကျမ အသုံးကျ မကျ နောက်၂ နှစ်ပြည့်ရင် သူဋ္ဌေးကပဲ ကျမတို့ရဲ့စကားကို ပိုပြောနိုင်မလား ….
ကျမကပဲ သူဋ္ဌေးတို့ရဲ့ စကားကို ပိုပြောနိုင်မလား စိန်ခေါ်ရဲလား လို့ မေးလိုက်တယ်။သူဋ္ဌေးရဲ့ မျက်နှာမှာ ရုတ်ချည်းအံ့သြသွားတယ် …..မမျော်လင့်တဲ့ စကားက သူဋ္ဌေးရဲ့ အရှိုက်ကို ထိပုံရတယ် …..
နောက်မှ သူဋ္ဌေးက မဲ့ပြုံးပြုံးပြီး မင်းစိန်ခေါ်မှုကို ငါလက်ခံတယ်တဲ့…..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….သူဋ္ဌေး ဒီလိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ နေ့ရက်မတိုင်ခင်ထိ ကျမကို မင်းတို့ မြန်မာတွေ စောက်သုံးမကျဘူး ဆိုတဲ့စကား လုံးဝမပြောပါ ဆိုတာလည်း ကျမကို ကတိပေးဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်……
အိုကေလေ မင်းပြောတဲ့ ၂ နှစ်မပြည့်ခင်ထိ ငါမပြောဘူး စိတ်ချ ကတိပေးတယ်တဲ့…..ဖွေးစိန်လေ စိန်ခေါ်ထားမှတော့ ဘယ်အညံ့ခံမလဲ….မြန်မာတွေ မညံ့ဘူးဆိုတာ သူဋ္ဌေး သိစေရမယ်…..
မြန်မာတွေ ဘယ်လောက်ထိ ထက်မြက်လည်းဆိုတာ သူဋ္ဌေးသိစေရမယ် ။အလုပ်ပြီးတာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာ မှန်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ် ကိုယ့်ကိုယ့်ကို ပြန်ကြည့်ုပီး အင်္ဂလိပ်ပြောလေ့ကျင့် တစ်ရက် နှစ်ရက် တစ်လ နှစ်လ တစ်နှစ် ၂ နှစ်…..
သူဋ္ဌေး ဒီနေ့ ကျမကို အချိန်ပေးနိုင်မလား ” မင်းဘာလုပ်ဖို့လဲ ခွင့်ယူဖို့လား အပြင်ထွက်ဖို့လား…မဟုတ်ပါဘူး သူဋ္ဌေးနဲ့ ကျမ စားပွဲပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စကားတွေပြောချင်လို့ပါ ”
သူဋ္ဌေး မျက်ခုံးမြင့်တက်သွားတယ် တစ်ချက်စဉ်းစားတယ် ပြီးမှ ကောင်းပြီးလေ ဒီညနေ ငါအလုပ်က ပြန်လာတဲ့အခါ မင်းနဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ စကားပြောကြတာပေါ့ ငါစောပြီး ပြန်လာခဲ့မယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ဖြစ်ရပ်ကို သူဋ္ဌေး မေ့နေလောက်ပြီးမှန်း သူဋ္ဌေးကိုကြည့်တာနဲ့ သိနေပါတယ် ပြောခဲ့သူအတွက် ပြောပြီးသား စကားလေထဲ ပျောက်ကွယ်သွားသလို သူဋ္ဌေးရဲ့ အသိမှာလဲ ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီး….
အပြောခံရသူအတွက် အသဲထဲ အရိုးထဲ စိမ့်နာသလို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးဆိုတာလည်း ဒီနေ့မှာတော့ သူဋ္ဌေးသိသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့ သူဋ္ဌေးနဲ့ ဖွေးစိန် ဆက်ဆံရေးက အရင် ၂ နှစ်တုန်းကလုို သူစိမ်းမဆန်တော့ပါဘူး ….
တကယ့်ကို မိသားစုသဖွယ် ဖြစ်နေပါပြီး စကားဝိုင်းက နွေးထွေးမှာပါလေ….သူဋ္ဌေးက သူ့စကားအတိုင်းပဲ ညနေ အစောကြီး ပြန်လာခဲ့တယ် အရင်တုန်းကလည်း မိသားစုတွေနဲ့ အတူထမင်းစားနေကျမို့ ဒီနေ့မှာလည်း သူဋ္ဌေးတို့ မိသားစုတွေနဲ့ ထမင်းစားကြပါတယ်။
ကံကောင်းတာတစ်ခုက သူဋ္ဌေးတို့မိသားစုဟာ ဖွေးစိန်ကို အလုပ်သမားတစ်ဦးလို မဆက်ဆံပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို ဆက်ဆံလေ့ရှိတာပါပဲ တစ်ခါတစ်လေ အပြောအဆိုမတတ်တာကလွဲလို့ပေါ့…..
ကဲ ဖွေးစိန် မင်းဘာပြောမလို့လဲ ပြောလို့ရပြီ …သူဋ္ဌေးတို့ စင်္ဂပူနိုင်ငံက တအားကို တိုးတက်ပြီး စည်းကမ်းရှိလိုက်တာနော် နိုင်ငံကလူတွေလည်း ချမ်းသာတယ် နိုင်ငံလည်းချမ်းသာတယ် အာရှကျားလို့လဲ တင်စားခေါ်ဝေါ်တာ ခံရတယ် ဒီစင်္ဂပူနိုင်ငံကြီးကိုလေ့့
ဘယ်ရမလဲ ဖွေးစိန်လေ စကာင်္ပူနိုင်ငံအကြောင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအကြောင်း ဖေ့ဘုတ်မှာ တင်သမျှ မှတ်ထားသမျှ လေ့လာထားသမျှတွေကို အင်္ဂလိပ် အားရပါးရပြောသွားလိုက်တာ သူဋ္ဌေးဆို ငေးလို့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ နားထောင်နေတော့တာ စကားဆုံးတော့မှ သူဋ္ဌေးက မေးတယ်….
မင်းတယ်ပြီးသိပါလား ငါတို့နိုင်ငံအကြောင်းရော တခြားနိုင်ငံအကြောင်းတွေရော ငါမထင်ထားဘူး ” သူဋ္ဌေး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို သူဋ္ဌေးမှတ်မိသေးလား ….
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့စကားကို ပိုပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေ ခုသူဋ္ဌေးအလှည့် ကျမနိုင်ငံအကြောင်းကို ကျမမမေးပါဘူး သူဋ္ဌေးနိုင်ငံအကြောင်းကိုပဲ ကျမတို့စကားနဲ့ ပြောပြစမ်းပါ “ဟာ ငါမင်းတို့စကားမတတ်ဘူး မင်္ဂလာပါတစ်လုံးထဲ တတ်တယ် ”
ဖွေးစိန်ပြုံးလိုက်တယ် ဒီအပြုံးက ဖွေးစိန်အတွက် တကယ့်ကို အရသာရှိတဲ့ တကယ့်ကို တစ်သက်အမှတ်ရစရာကောင်းတဲ့ အပြုံးတစ်ခုလို့ပဲ ဖွေးစိန် စိတ်ထဲ မှတ်ယူထားခဲ့တယ် ပြီးမှ တစ်လုံးချင်း သူဋ္ဌေးကို ပြောလိုက်တယ်…..
သူဋ္ဌေး လူတိုင်းမှာ နိုင်ငံချစ်စိတ်ရှိတယ် ဆိုတာ သူဋ္ဌေးမမေ့ပါနဲ့ နိုင်ငံကိုထိရင် ဘယ်လူမျိုးမှ ခေါင်းငုံငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်……။##မူရင်းရေးသူအား credit photo online from
စကာင်ျပူသူဋ်ဌေးကို အံ့သွမှငျသကျစခေဲ့သော မအူပငျမွို့ နယျ ထနျးပငျကှကေ့ ကရငျမလေး ဖှေးစိနျ
သမုဒ်ဒရာ ဝမျးတဈထှာ မိသားစုအရေး ဘဝရှရေ့ေးအတှကျ သူမြားနိုငျငံ လာအလုပျလုပျတာလေ ကြှနျလာခံတာမှ မဟုတျတာ အဖိနှိမျ့ခံ အပွောအဆိုခံဖို့မှ မဟုတျတာ …သူတို့ပေးတဲ့ လစာနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ လုပျအားကို ပေးခဲ့တာပဲ အလုပျရှငျနဲ့အလုပျသမားပဲ…..
လူလူခငျြးအပျေါ ငါလစာပေးထားရတယျ ပကျဆံပေးရတယျဆိုပွီး သူတို့ပွောသမြှ ဆိုသမြှ ခေါငျးငုံ့ခံကာ နတေတျတဲ့သူတှထေဲ ဖှေးစိနျ တဈယောကျမပါပေါငျ။
မိသားစုအရေးကွောငျ့ စကာင်ျပူကို စှနျ့စားပွီး ထှကျခှါ လာခဲ့ရတာ စင်ျကာပူသှားရငျ ဒါတှေ ဒါတှေ သငျယူဖို့လိုတာ ဆိုတာတှေ အဂေငျြ့တှေ စီစဉျသမြှ ပေးသမြှ သငျတနျးတှေ သငျယူပွီးမှ ဖှေးစိနျက လာခဲ့တာ ဘလိုငျးသကျသကျ လာခဲ့တာမဟုတျဘူး….
” နငျတို့ မွနျမာတှေ ဘာမှ စောကျသုံးမကဘြူး ” တဲ့…..ပွောလိုကျတဲ့ သူဋ်ဌေးစကား အသဲကို ဆတျဆတျခါအောငျ နာကငျြသှားတာ ပွောတာတောငျ နိုငျငံနဲ့ခြီ ပွောတာ နိုငျငံကို ထိပါးပွောတာ တဈနိုငျငံလုံးကို စျောကားလိုကျတာ….
ဖှေးစိနျတဈယောကျထဲကို ” နငျက ဘာမှ အသုံးမကဘြူး ” ပွောရငျ ခံနိုငျသေး သီးခံနိုငျသေး ခုက နိုငျငံကို ထိပါးတဲ့ စကားကို ပွောတာ ဖှေးစိနျ ဘယျသီးခံနိုငျပါမလဲ…..
ဖွဈပုံက ဒီလို…..သူဋ်ဌေးက လြှာရှညျပွီး အလုပျနဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ စကားအပိုတှနေဲ့ အင်ျဂလိပျလိုမေးတာ ပွောတာကို ပွနျမပွောနိုငျလို့တဲ့လေ….နငျတို့ မွနျမာတှေ ဘာမှ စောကျသုံးမကဘြူးဆိုပွီ ပွောလိုကျတာ…..
ကိုယျက အင်ျဂလိပျလူမြိုးမှ မဟုတျတာ အင်ျဂလျိပျတဈယောကျလို ဘယျလိုပွောနိုငျမလဲ အလုပျကိစ်စပဲ ပွောနိုငျမှာပေါ့…..ခု မငျးတို့ရှာက ဘာတှလေုပျစားကွသလဲ …..
အိမျခွဘေယျလောကျရှိလဲ ….မငျးတို့နိုငျငံက အေးလား ပူလား …..ရာသီဥတုတှကေော ဘာတှကေော လိုကျမေးနတော အကုနျဘယျလိုပွောတတျမှာလဲလို့….ဒါကိုပဲ စောကျသုံးမကဘြူးပွောတော့ ခံနိုငျရိုးလား…..
သူဋ်ဌေးကို မီးတောကျတဲ့မကျြလုံးနဲ့ ပွနျကွညျ့ပွီး…..ဖှေးစိနျ ပွနျပွောလိုကျတယျ။သူဋ်ဌေးကို ကမြစိနျချေါတယျ ….ကမြ အသုံးကြ မကြ နောကျ၂ နှဈပွညျ့ရငျ သူဋ်ဌေးကပဲ ကမြတို့ရဲ့စကားကို ပိုပွောနိုငျမလား ….
ကမြကပဲ သူဋ်ဌေးတို့ရဲ့ စကားကို ပိုပွောနိုငျမလား စိနျချေါရဲလား လို့ မေးလိုကျတယျ။သူဋ်ဌေးရဲ့ မကျြနှာမှာ ရုတျခညျြးအံ့သွသှားတယျ …..မမြျောလငျ့တဲ့ စကားက သူဋ်ဌေးရဲ့ အရှိုကျကို ထိပုံရတယျ …..
နောကျမှ သူဋ်ဌေးက မဲ့ပွုံးပွုံးပွီး မငျးစိနျချေါမှုကို ငါလကျခံတယျတဲ့…..ကြေးဇူးတငျပါတယျ ….သူဋ်ဌေး ဒီလိုစိနျချေါနတေဲ့ နရေ့ကျမတိုငျခငျထိ ကမြကို မငျးတို့ မွနျမာတှေ စောကျသုံးမကဘြူး ဆိုတဲ့စကား လုံးဝမပွောပါ ဆိုတာလညျး ကမြကို ကတိပေးဖို့ လိုမယျထငျတယျ……
အိုကလေေ မငျးပွောတဲ့ ၂ နှဈမပွညျ့ခငျထိ ငါမပွောဘူး စိတျခြ ကတိပေးတယျတဲ့…..ဖှေးစိနျလေ စိနျချေါထားမှတော့ ဘယျအညံ့ခံမလဲ….မွနျမာတှေ မညံ့ဘူးဆိုတာ သူဋ်ဌေး သိစရေမယျ…..
မွနျမာတှေ ဘယျလောကျထိ ထကျမွကျလညျးဆိုတာ သူဋ်ဌေးသိစရေမယျ ။အလုပျပွီးတာနဲ့ အင်ျဂလိပျစကားလလေ့ာ မှနျရှမှေ့ာ မတျတပျရပျ ကိုယျ့ကိုယျ့ကို ပွနျကွညျု့ပီး အင်ျဂလိပျပွောလကေ့ငျြ့ တဈရကျ နှဈရကျ တဈလ နှဈလ တဈနှဈ ၂ နှဈ…..
သူဋ်ဌေး ဒီနေ့ ကမြကို အခြိနျပေးနိုငျမလား ” မငျးဘာလုပျဖို့လဲ ခှငျ့ယူဖို့လား အပွငျထှကျဖို့လား…မဟုတျပါဘူး သူဋ်ဌေးနဲ့ ကမြ စားပှဲပျေါမှာ ထိုငျပွီး စကားတှပွေောခငျြလို့ပါ ”
လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈက ဖွဈရပျကို သူဋ်ဌေး မနေ့လေောကျပွီးမှနျး သူဋ်ဌေးကိုကွညျ့တာနဲ့ သိနပေါတယျ ပွောခဲ့သူအတှကျ ပွောပွီးသား စကားလထေဲ ပြောကျကှယျသှားသလို သူဋ်ဌေးရဲ့ အသိမှာလဲ ပြောကျကှယျသှားပါပွီး….
အပွောခံရသူအတှကျ အသဲထဲ အရိုးထဲ စိမျ့နာသလို ဘယျတော့မှ မမဘေူ့းဆိုတာလညျး ဒီနမှေ့ာတော့ သူဋ်ဌေးသိသှားမှာပါ။ဒါပမေဲ့ သူဋ်ဌေးနဲ့ ဖှေးစိနျ ဆကျဆံရေးက အရငျ ၂ နှဈတုနျးကလျုို သူစိမျးမဆနျတော့ပါဘူး ….
တကယျ့ကို မိသားစုသဖှယျ ဖွဈနပေါပွီး စကားဝိုငျးက နှေးထှေးမှာပါလေ….သူဋ်ဌေးက သူ့စကားအတိုငျးပဲ ညနေ အစောကွီး ပွနျလာခဲ့တယျ အရငျတုနျးကလညျး မိသားစုတှနေဲ့ အတူထမငျးစားနကေမြို့ ဒီနမှေ့ာလညျး သူဋ်ဌေးတို့ မိသားစုတှနေဲ့ ထမငျးစားကွပါတယျ။
ကံကောငျးတာတဈခုက သူဋ်ဌေးတို့မိသားစုဟာ ဖှေးစိနျကို အလုပျသမားတဈဦးလို မဆကျဆံပဲ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ မိသားစုဝငျတဈယောကျလို ဆကျဆံလရှေိ့တာပါပဲ တဈခါတဈလေ အပွောအဆိုမတတျတာကလှဲလို့ပေါ့…..
ကဲ ဖှေးစိနျ မငျးဘာပွောမလို့လဲ ပွောလို့ရပွီ …သူဋ်ဌေးတို့ စင်ျဂပူနိုငျငံက တအားကို တိုးတကျပွီး စညျးကမျးရှိလိုကျတာနျော နိုငျငံကလူတှလေညျး ခမျြးသာတယျ နိုငျငံလညျးခမျြးသာတယျ အာရှကြားလို့လဲ တငျစားချေါဝျေါတာ ခံရတယျ ဒီစင်ျဂပူနိုငျငံကွီးကိုလေ့့
ဘယျရမလဲ ဖှေးစိနျလေ စကာင်ျပူနိုငျငံအကွောငျး ကမ်ဘာ့နိုငျငံအကွောငျး ဖဘေု့တျမှာ တငျသမြှ မှတျထားသမြှ လလေ့ာထားသမြှတှကေို အင်ျဂလိပျ အားရပါးရပွောသှားလိုကျတာ သူဋ်ဌေးဆို ငေးလို့ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ နားထောငျနတေော့တာ စကားဆုံးတော့မှ သူဋ်ဌေးက မေးတယျ….
မငျးတယျပွီးသိပါလား ငါတို့နိုငျငံအကွောငျးရော တခွားနိုငျငံအကွောငျးတှရေော ငါမထငျထားဘူး ” သူဋ်ဌေး လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈက စိနျချေါမှုတဈခုကို သူဋ်ဌေးမှတျမိသေးလား ….
ဘယျသူက ဘယျသူ့စကားကို ပိုပွောနိုငျတယျဆိုတာကိုလေ ခုသူဋ်ဌေးအလှညျ့ ကမြနိုငျငံအကွောငျးကို ကမြမမေးပါဘူး သူဋ်ဌေးနိုငျငံအကွောငျးကိုပဲ ကမြတို့စကားနဲ့ ပွောပွစမျးပါ “ဟာ ငါမငျးတို့စကားမတတျဘူး မင်ျဂလာပါတဈလုံးထဲ တတျတယျ ”
ဖှေးစိနျပွုံးလိုကျတယျ ဒီအပွုံးက ဖှေးစိနျအတှကျ တကယျ့ကို အရသာရှိတဲ့ တကယျ့ကို တဈသကျအမှတျရစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးတဈခုလို့ပဲ ဖှေးစိနျ စိတျထဲ မှတျယူထားခဲ့တယျ ပွီးမှ တဈလုံးခငျြး သူဋ်ဌေးကို ပွောလိုကျတယျ…..
သူဋ်ဌေး လူတိုငျးမှာ နိုငျငံခဈြစိတျရှိတယျ ဆိုတာ သူဋ်ဌေးမမပေ့ါနဲ့ နိုငျငံကိုထိရငျ ဘယျလူမြိုးမှ ခေါငျးငုံငွိမျခံနမှောမဟုတျပါဘူးရှငျ……။##မူရငျးရေးသူအား credit photo online from